Uvavanyo olukhawulezayo phakathi kwe-iOS 9.3.1 kunye ne-iOS 9.3 | IPhone iindaba
UIgnacio Sala | | iOS 9, Iimveliso ze-Apple
U-Apple uphinde wazenza isidenge kwiveki ephelileyo xa ikhuphe ingxelo yokugqibela ye-iOS 9.3 emva kweebheta ezisixhenxe. Uninzi lwabasebenzisi abaxhomekeke kwisixhobo abasisebenzisileyo ayinakudlula kwiscreen sokuvula, nangona bezamile kaninzi kwaye ngamaxesha ahlukeneyo kwimeko yokuba ingxaki ivela kwiiseva zika-Apple.
Ezo zeCupertino ngokukhawuleza kuye kwafuneka barhoxise uhlaziyo ezazinika iingxaki zokumilisela kamva apho ingxaki yokusombulula isonjululwe. Kuyamangalisa ukuba emva kweebheta ezisixhenxe, ukusilela okunjalo kubeke inkampani ekukhanyeni okungalunganga.
Kungekudala emva koko, kwafunyanwa ibug entsha engavumeli ukuvula amakhonkco athile eSafari, ibug eqinisekiswe ngokusesikweni nguApple. Siza kuthi i-iOS 9.3 ibe sisihloko seziganeko kunye neempazamo ezithi ukuba bebeyenze ngabom ngekhe ivele kakubi. Kungekudala emva koko, ezo zikaCupertino zakhupha i-iOS 9.3.1 apho iApple kwithiyori isombulule kungekuphela ingxaki yekhonkco kodwa impazamo ngamanye amaxesha eqale ukubonakala kwizixhobo ezithile. Olu hlaziyo lutsha alujolisanga ngokwendalo ekuphuculeni ukusebenza kwezixhobo ezindala, kodwa kusekho abasebenzisi abakhetha ukuzivavanya ngokwabo ukuba olu hlaziyo lutsha luchaphazela ukusebenza kwezixhobo okanye hayi.
Apha ngezantsi sikubonisa iividiyo ezininzi apho sinokubona khona Uvavanyo lwesantya esahlukileyo kunye ne-iOS 9.3 kunye ne-9.3.1 kwii-iPhone 4s, i-iPhone 5, i-iPhone 5 kunye nezixhobo ze-iPhone 6. Ukuba unexesha lasimahla, ungazenzela iimvavanyo ekhaya. Okanye ungazijonga ezi vidiyo zilandelayo ukuba ufuna ukufumanisa ukuba olu hlaziyo lwamva nje lwahluke kakhulu kolo lwandulelayo okanye ukuba, ngokuchaseneyo, bobabini bagcina ukwenziwa okufanayo kunye namaxesha okusebenza.
I-PS: Umfanekiso wekhava unika imikhondo emininzi
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 9 » Uvavanyo olukhawulezayo phakathi kwe-iOS 9.3.1 kunye ne-iOS 9.3
Umfanekiso okwikhava, yintoni eyiyo, iyadida nge-100%, xa umahluko wokuqala wezixhobo ungekho kwa-1s margin, kunye nokuvula iiterminal ezi-2 ngomnwe wakho ... .ukuchaneka, bayacima imitya yamandla, kwaye umtya usete kwakhona.
Uhlaziyo ngalunye lushiya i-iOS ifunxwe ngakumbi kwizixhobo ezindala, esele zibonakala kwizigidi zabasebenzisi abakhalazayo!
ayinguye wonke umntu ofuna iphone 6 yosuku ukusebenzisa i-whatsapp nokunye okuncinci
kodwa ukuhamba kuka-Apple kukuba utshintshe i-terminal ngokukhawuleza okukhulu!
UJaime Luis sitsho
I-iphone 5S yam yaphahlazeka kangangeyure enesiqingatha, emva koko yasebenza phakathi, uninzi lwezicelo aluzange lusebenze. Xa uzama ukuvula nayiphi na usetyenziso, kunye nokuseta enye; Iphinda yengozi kwakhona kangangeyure enesiqingatha. Ukuba nabani na unokundinceda kule nto, ndiyayixabisa.
Phendula kuJaime Luis
Ndine-iPhone 5 ene-iOS 9.2.1, ngaba ucebisa ukuba ndihlaziye? Enkosi. Uqaphele ntoni ngohlaziyo?
le yiklasikhi kwi-beta nganye okanye uhlaziyo i-iOS ingaphezulu kweparao kunenqwelomoya yemabhile!
kunye nevidiyo ethelekisayo yenguqulo ios7 vs ios 9.3 ios8 vs ios 9.3 kunye neos9.0 ukuya kwi-9.3 kamva ukuba uyabona ukuba akukho phuculo okanye hayi.
Kudala ndayeka ukugijima iPads kunye neePhones; Nge-9.3.1, zombini ezi zixhobo ziqhuba kakuhle kakhulu kum; Ndiyalikhumbula nje ixesha lejele.
URichard Richilla Ramos sitsho
Ndisenaso isixhobo sam se-4s esivaliwe ngohlaziyo ndikhumbula yonke into kwaye akukho nto, umntu onokundinceda nceda
Phendula uRichard Richilla Ramos